Britain Yotemera Zvirango Vakuru veVasori, Mauto neMapurisa neNyaya yeKutyora Kodzero dzeVanhu
Kukadzi 01, 2021
Britain iyo yakabuda musangano reEuropean Union, nhasi yatemera zvirango gurukota rezvevasori, VaOwen Ncube, mukuru wevasori VaIsaac Moyo, mukuru wemapurisa, VaGodwin Matanga, pamwe nemumiriri weZimbabwe kuTanzania VaAnselem Sanyatwe ichavapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Vachizivisa nezvezvirango izvi gurukota reBritain rinoona nekudyidzana nedzimwe nyika, VaDominic Raab vati vana ava vane chekuita nekuurawa kwevanhu makumi maviri nevatatu pakuratidzira kwakaitwa muna 2019 uye zvinoenderana nehurongwa hwenyika yavo hwekuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu.
VaRaab vati zvirango izvi zvakanangana nevakuru vakuru muhurumende chete uye hazvibate veruzhinji vachiti hurumende yavo icharamba ichitsigira vanhu vemuZimbabwe kuderedza hurombo, kupedza nzara, kusimudzira nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekurwisana nedenda reCovid-19.
Zvirango izvi zvinoreva kuti vana ava havakwanisi kuenda UK kana kushandisa mabhanga ekumunyika iyi.
Vakafaanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti yeZimbabwe haisati yave nemhinduro pane zvaitwa neBritain parizvino uye vachipindura nekufamba kwenguva.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaKindness Paradza, vati vashamiswa nekuita kweBritain nekuti nguva yapfuura vange vari kutaurirana zvakanaka.
Asi vati zvisinei nezvaitika vacharamba vachitaura nenyika iyi pasi pehurongwa hwavo hwekugadzirisa hushamwari nenyika dzepasi rino.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reMDC T, VaWitness Dube, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive nehukama hwakanaka nedzimwe nyika.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo, vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshimiswa pane zvaitwa neBritian vachiti zvinonderana nemabatirwe ari kuitwa vanhu nehurumende munyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vachidzisa paGreat Zimbabwe University, VaJoel Mukusha, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvirango izvi zvatamerwa vashoma zvinokanganisa mashandiro ehurumende.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vatemerwa zvirango ava sezvo vange vasiri kudaira nharembhozha dzavo.
VaSanyatwe avo vaimbove mukuru wemauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard pamwe naVaNcube vakatemerwawo zviranga neAmerica.